XANUUNADA XAYAWAANKA EE GURIGA LAGU XANAANEEYO - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Fuchsia waa warshad dilka ah oo sii kordhaysa dabiiciga ah ee Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika iyo New Zealand. Fuchsia indoor waa warshad hybrid ah, oo leh noocyo iyo qaabab badan. Waxaa lagu beeray dhaqanka in ka badan 200 oo sano, iyo beeralayda ubaxa waxay ugu yeeraan "farta Japan" ama "ballerina".
Under xaaladaha dabiiciga ah, fuchsia wuxuu leeyahay muuqaalka kayn ah leh laamood jilicsan. Caleemaha geedka waa cagaar ama guduud, waxay leeyihiin oval, muuqaal waxoogaa calaamad ah oo leh jajabta geesaha. Ubaxku wuxuu ka kooban yahay calyx iyo corolla tuubbo leh geeso cirif leh. Dhirta ubaxyada ayaa si joogto ah oo ubax ah u ubaxyada ubaxyada. Fududeeyuhu waa ka dheer yahay calyx, maqaarka calyx waa ka dheer yahay tufaaxa. Ubaxyada Fuchsia waxay u muuqdaan kuwa cagaaran, midabkoodu waa caddaan, casaan, oranji, casaan, kareem, lilac iyo guduud.
Fuchsia ee guriga ma u baahan tahay daryeel adag, laakiin ubaxistu u baahan tahay in la ogaado qaar ka mid ah xafladaha ku saabsan arrintan. Waxaa jira talooyin ku saabsan doorashada ee geedo, daryeelka ee dhirta inta lagu jiro dormancy iyo ubax, transplanting iyo manjooyin.
Ma taqaanaa? Nafaqaynta fuchsia waxay socotaa wax ka badan 200 sano. Muddadan, qiyaastii 15,000 noocyo iyo Beelaha dhirta waxaa la siin jiray bred.
Sida loo doorto geedo fuchsia dukaanka
Dukaamada, fuchsia waxaa loo iibiyaa si khaas ah ama 3-4 gooyn. Waxay kuxirantahay xajmiga dheriga dhirta oo dhirta la koray. Doorashada seedling, waxaad u baahan tahay inaad taxadar u yeelato waqtiyadaas:
Hadday dhirta si habboon u sameyso, sida qanjirka loo sameeyay;
Hadday dhirta ku jirto xaalad wanaagsan;
Ma u egtahay mid caafimaad qaba - caleemo cagaaran iyo caleemo badan, cufan qurux badan;
Xirmooyinka waa in aan laga arki karin godka hoose ee dheriga.
Haddii geedo u wanaagsan yahay, laakiin caleemuhu waa yar yihiin, dhirta ma qaadan doonaan sawir qurxoon si dhakhso ah. Caleemaha yaryar waxay muujin karaan waraabin ku filan iyo quudin.
Waa wax xun haddii geedo dukaanku ku yaal meel gudcur ah oo aan si fiican u cabbin. Caleemaha dhirta noocan oo kale ah ayaa dhici karta, iyo caleemuhu waxay noqdaan huruud.
Marka aad iibsanaysid geedo fuchsia, waxaa muhiim ah in la hubiyo in aanay jirin cayayaanka iyaga. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad kormeerto hoosta caleemaha, iyo haddii aysan jirin dhibco iyo dhibco, markaa wax walbaa waa mid. Sidoo kale, ka dib marka la ruxo warshad, cadaantu waa inaanay duulin, way adagtahay in laga takhaluso.
Daryeelka Fuchsia ee guriga
Daryeelka fuchsia guriga waa sahlan tahay. Waxaa jira qarsoodi ah fuchsia care, waana ay fudud yihiin.
Fuchsia jecel yahay qolal qabow, xagaaga heerkulka waa inuusan ka badnaan 20 darajo. Wixii ku habboon ee waqooyiga ama bariga ku habboon. Xilliga xagaaga, dhirta waa in laga badbadiyaa digaag; haddii ay suurtagal tahay, wuxuu ubaahan yahay inuu boos ka helo balakoonka ama barxadda, halkaas oo kaliya subaxda qorraxda qorraxdeeda ayaa dhici doonta. Inta kale ee maalinta fuchsias ka fiican si ay u noqdaan hooska qayb ahaan. Haddii aysan jirin wax ikhtiyaari ah oo lagu dhajiyo warshad ku jirta guriga iftiinka leh iftiinka qorraxda, fuchsia ayaa sidoo kale dareensan in ay wanaagsan tahay iftiinka macmal.
Waraabinta dhirta waa inay noqotaa mid joogto ah, taas oo si gaar ah muhiim u ah inta lagu jiro koritaanka iyo ubaxa. Biyaha waa in la sifeeyo ama difaacaa. Biyo meydhin xagaaga sidoo kale waa mid wax ku ool ah, waxay cusboonaysiisaa geedka. Qoyaanka hawada ayaa sidoo kale lagu gaari karaa adigoo ku dhajinaya dheriga dhirta digsi biyo.
Waa muhiim! Haddii caleemaha dhirta la miiray, waa in aan la waraabin oo kaliya, laakiin sidoo kale buufin biyo. Ka dib qaabsocodyadan, fuchsia waxaa lagu daboolay wax aan la taaban karin - taas waxaa loo sameeyaa si loo soo celiyo cufnaanta caleemaha.
Laga bilaabo gu'ga ilaa dayrta, muddada koritaanka firfircoon, dhalmo iyo ubax ee dhirta. Waxaa lagama maarmaan ah in la daryeelo sida loo quudiyo fuchsia guga, maadaama ay tani waxay door weyn ka ciyaari doontaa xilliga firfircoon ee nolosha geedka. Inta lagu jiro ubax for ubaxa doorbiday Bacriminta ku jira badan oo ah potassium iyo fosfooraska.
Iyadoo daryeel habboon, fuchsia gudaha ku farxi doonaa milkiilaha sanado badan leh ubaxyo jilicsan.
Noocyada daryeelka muddada ubaxyada
Marka fuchsia blooms, waxaa jira talooyin gaar ah oo loogu talagalay daryeelka. Inta lagu jiro muddada ubax, waraabinta waa in ay ahaato mid ku filan oo joogto ah. Qoyaan joogto ah ee xididada waa mid aan la aqbali karin, laakiin waa lagama maarmaan in la waraabiyo dhirta ka dib marka qalalan si fiican u qalajiyey.
Fuchsia waa mid xasaasi ah in isbedel, sidaas gaar ahaan inta lagu jiro xilliga ubax aadan ka dhigi kartaa permutation iyo rogaa geedka. Tallaabooyinka noocan oo kale ah waa kuwo qallafsan oo leh ubaxyo iyo burooyinkoodii.
Dhirta badan ma noqon karo transplanted inta lagu jiro ubax, xeerkani wuxuu quseynayaa fuchsia. Sida quudinta, tusaale ahaan, Bacriminta Luxi Luxe makha waxaa ku jira nitrogen, potassium, fosfooraska, birta, zinc, manganese, boron, copper, molybdenum. Aad ayay ugu habboon tahay quudinta fuchsia. Laga soo bilaabo daqiiqad ah burooyinkuna waxay u muuqdaan, waxaad dhigi kartaa fuchsia bacriminta dareeraha ah ee dhirta ubax toddobaadkii hal mar.
Ma taqaanaa? Haddii ubaxu daciif yahay, iyo caleemaha cusub waxay yar yahiin, tani waxay muujineysaa baahida loo qabo in lagu quudiyo geedka.
Transplanting iyo jaridda fuchsia
Fuchsia bedel sida loogu baahan yahay. Waxay dhacdaa ka dib markii iibka warshad, iyo sidoo kale sida dheriga uu yaraado. Ciidda for fuchsia ka kooban yahay sod iyo caleen dhulka, ciid, peat iyo humus, kuwaas oo lagu qaaday qaybo siman. Waxaad isticmaali kartaa ciidda diyaar u ah dhirta. Aad bay muhiim u tahay in la saaro dheecaan hoose ee dheriga.
Dareer ahaan, dhoobka caadiga ah ee la balaariyey ayaa loo isticmaali karaa, marka dusha sare ee ciidda la dhigo. Warshad ku jirta dhar cusub ayaa la dhigaa buro dhul ah oo ay ku korodhay. Hulalka haray ayaa ka buuxsamay ciidda carrada.
Ka dib markii transplanting fuchsia gelin on iftiinka, gooyaa dhererka afkoda by saddex daloolow, waraabiyey oo si fiican buufin. Haddii habsocodka loo saxay si sax ah, dhirta ayaa sii deyn doonta ubaxyo badan.
Gooyo iyo samaynta fuchsia waxay bilaabataa marka dhirta weli tahay jirid. Warshad waa mid aad u caag, sidaas darteed waxaa la siin karaa qaab kasta - baadiyaha, dhaadheer, barxadda, geed shtambovy.
Milkiilayaasha cusub ee fuchsia badanaa waxay leeyihiin su'aal marka goynayaan fuchsia. Waxaa lagu talinayaa in la gooyo fuchsia laba jeer sanadkii: horraantii Oktoobar, marka xilli sii kordhaya uu ka dhammaaday, iyo horaantii Jannaayo. Inta lagu jiro manjooyin kowaad, oo dhan oo la jilciso afkoda ayaa laga saaray. Iska yaree kharashka 2 cm ee ka koreeya burooyinka hurdada. Manjooyin labaad ayaa loogu talagalay dhismaha ugu dambeeya ee taajka.
Marka geedka kaliya uu galo guriga, waxaa loo baahan yahay inuu la qabsado. Beeraha ubaxa badanaa waxay la yaabaan goorta iyo sida loo jaro fuchsia ka dib iibsashada si ay si habboon u qaabeeyaan. Ka dib markii la qabsashada iyo xididka, dhirta sii deynaya caleemo cusub. Waqtigan xaadirka ah, waxaad u baahan tahay inaad xirto dusha sare ee geedka. Si aad u sameyso dhirta ubax badan iyo caleenta, caleemaha cusub ayaa xoqan.
Waa muhiim! Waa mid aad u muhiim ah in la sameeyo fuchsia ee noocyada maarmaanka si sax ah. Waxay samaysan karaan caleemo dheer, haddii aysan ku dhicin wakhtigooda. Caleemaha noocan oo kale ah waxay ku baxaan oo kaliya meelaha ugu. Haddii la gaabiyo, ubax cusub ayaa soo muuqan doona wax ka qabashada mudo 3-4 toddobaad ah.
Xaaladaha ugu fiican ee dhirta jiilaalka
Xilliyado kala duwan, fuchsia waxay marxaladaha kala duwan ee noloshooda iyo horumarintooda ku dareemaan. Marka lagu daro mudooyinka koritaanka firfircoon iyo ubax, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa la sameeyo fuchsia xilliga dayrta iyo jiilaalka.
Haddii inta lagu jiro xilliyada koritaanka firfircoon ee ubaxa iyo ubaxyada qoyaanka ah waa lagama maarmaan inta badan, xilliga dayrta ee soo noqnoqda waraabka ayaa la dhimayaa, iyo xilliga qaboobaha waxaa la waraabiyaa 1-2 jeer bishii.
Xilliga jiilaalka, heerkulka hawada ee qolka fuchsia waa inay ahaataa ilaa 15 ° C. Warshadu waxay noqon doontaa mid raaxo leh 8-10 digrii. Fuchsia Wintering ee aqalka waxaa suurtagal ah balakoonka ama loggia, laakiin waa inaad hubisaa in heerkulka uusan jirin mid aad u hooseeya. By habka, xilliga qaboobaha ma aha inaad bacrimiya fuchsia.
Inta lagu jiro jiilaalka waa muhiim in warshad si fiican loo nasasiiyo. Iyadoo dib loo soo celiyay xoog, xilliga cusub ee fuchsia siin doonaa ubax badan, kaas oo sii socon doona muddo dheer. Si aad u dhisto xoogga warshad, waa lagama maarmaan in la joojiyo ka hor dormancy jiilaalka iyo ka saar dhammaan cayayaanka.
Labo habab oo habka taranta
Fuchsia waxaa lagu faafin karaa labo siyaabood - oo ay ku jiraan miraha iyo raacida.
Abigalinta miraha. Waxyaabaha faafinta abuurka ah ee badanaa waa kuwa jilicsan. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in fuchsia koray ka soo abuurka ma haynin sifooyinka geedka asalka ah (waxaa dhif ah dukaanka).
Marka faafin by abuurka, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro is-pollination of warshad iyo pollination by cayayaanka. Si arrintan loo sameeyo, ka saar antivenaha ubaxa ubaxsan, gogol-beelka dhirta dhirta adoo saaraya dhaleeceynta pistil. Kadibna maro ama xaashi xaashid ah ayaa la geliyaa ubaxa, iyada oo lagu dhejinayo xayawaanka hoose ee ubaxa, taasoo ka soocaysa cayayaanka.
Ka dib markii Bisaylkiisa, midhaha ayaa la jaraa si looga saaro abuurka, oo u baahan in la qalajiyo mustaqbalka.
Abuurka Fuchsia waxaa lagu beeray substrate qoyan iyada oo aan la gelin. Xaaladaha aqalka dhirta waxaa loo sameeyaa weelka oo leh iftiin fiican iyo u hoggaansamida heerkulka qolka. Mudo yar gudahood, caleemaha waa in ay muuqdaan. Dhawr bilood ka dib, godadka qulqulaya, iyo dhowr bilood oo kale kadib waxaa lagu beeray dheriyo kala duwan.
Goobta dibedda, geedo u baahan in la baro si tartiib tartiib ah, sababtoo ah iyada oo aan la qabsashada xaaladaha aan kuleylka ahayn, waxay ku wareegi karaan oo u dhiman karaan.
Ku dhalida by gooyn. Nidaam la isku halleyn karo ee fuchsia taranta - gooyn. Waxaa loo isticmaali karaa wakhti kasta sanadka, laakiin guga waa mudo wanaagsan. Gooynta yaryar waxaa lagu qaadaa 10-20 cm oo dheer, caleemaha qaybta hoose ayaa la saaraa, inta soo hartayna waa la soo gaabiyaa.
Xididaadda, jirida waxaa lagu dhejiyaa biyo sifeeyay oo lagu daboolay bac ama dhalo. Qiyaastii 4-10 maalmood, ayaa xididdadu muuqdaan. Uma baahnid inaad sugto ilaa ay aad u sarreeyaan, si dhakhso ah ayaa loogu beeray subagga.
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in la qaato gooyn dhallinyaro ah, maxaa yeelay dadka waaweyn waa weyn, iyo muddada ay xididkooda waa dheer.
Fuchsia Cudurrada iyo Cayayaanka
Fuchsias ma ahan kuwo u nugul cudurada iyo weerarada cayayaanka. Inta badan dhibaatooyinka ayaa soo baxa marka ay jiraan xaalado daryeel caafimaad oo aan habooneyn iyo waraabinta.
Cudurada fuchsia iyo cayayaanka:
Waxaa jira jilicsanaan jaale ah ama dhibco bunni ah caleemaha xilliga jiilaalka - waraabin aad u badan. Dagaal: ka dhig biyaha waraabinta;
Yellowness u muuqda inta u dhaxaysa xididdada caleemaha - manganese waa la waayay. Dagaal: quudiyaan dhirta leh bacriminta oo ay ku jiraan qaybta lagama maarmaanka ah;
Dhoobada qoyan waxay ku muuqanaysaa caleemaha leh dhibco cad oo budada ah - waxyeello qoyaan badan leh. Dagaal: Ku xoqidda xalka aasaasiga ah;
Caleemaha cagaaran - ma ahan magnesium iyo nitrogen ku filan. Dagaal: bacrimiya geedka leh nafaqooyinka ay ku jiraan qaybaha loo baahan yahay;
Caleemaha caleemaha - biyo ku filan, iftiin yar, hawo qalalan. Dhibaato: waxay siisaa xaalado raaxo leh dhirta;
Buds dhicin - nidaamka waraabka ee ku fashilmeen, ubaxa waa uu dhibsaday muddada ubax. Dagaal: Ha isku dhajin dheriga inta lagu jiro ubax, caadada u waraabiyo waraabinta;
Ubax gaaban - quudin ku filan, iftiin ama aad u kulul iyo waraabinta ku filan. Dhibban: Go'aamiya midka kore ee kor ku xusan sida badan sababo kiis gaar ah oo sax ah xaaladda;
Wareegyada Brown waxay ka muuqanayaan qaybta hoose ee caleemaha - cudur ka soo jareen. Dagaal: Ka saar caleemaha jiran, daaweeyo dhirta leh Topaz, jeermiska qalabyada la xiriira xiriirka geedka;
Muuqaalka muuqaalka duqsiyo cad - dirxiga duqsigu wuxuu nuugaa soodhaha geedka. Dagaal: ku dhaq caleemaha biyo saabuun ah, daawee fuchsia leh diyaarin gaar ah.
Waa muhiim! Haddii fuchsia ma Bloom, sabab u tahay tani waxay noqon kartaa la'aanta iftiinka, nafaqooyinka, heerkulka sare ee qolka, waraabin badan.
Talooyinka beeraha ubaxa
Xilliga kulaylka xagaaga waa in laga cabsado kuleylka dhirta geedka. Xalka dhibaatadan waa in la koro ubax dheriga dhoobada dhoobada ah.
Fuchsia waa mid aad u xasaasi u ah ciriiriga, meesha ay tahay in ay joogto ahaato. Haddii fuchsia uusan wax jeclaan, waxay daadin kartaa caleemo.
Marka fuchsia ma aha iftiin ku filan, waxay u faafi kartaa dherer, laakiin ma barbariga. Ogaanshaha xaaladda noocan ah ee geedka, waa lagama maarmaan in la saxo xaaladda iyadoo la bixinayo qadarka iftiinka loo baahan yahay.
Fuchsia dhaadheer leh bacriminta ma aha mid u qalantaa, sababtoo ah taas oo ka dhalatay taas waxay keeni doontaa caleenta caleenta iyo, laga yaabo, kaliya dhowr ah ubax.
Haddii dhirta uu niyad jabay wakhti cayiman cimilada xun ama nafaqada iyo biyaha, waxaa si fiican loogu dhiirri-galin karaa in lagu buufiyo kiciyaasha kobaca.